Mozika miainga amin’ny nentin-drazana sy rap : « Voarain’ny olona tsara ny tolotra », hoy i Volahasiniaina | NewsMada
Mozika miainga amin’ny nentin-drazana sy rap : « Voarain’ny olona tsara ny tolotra », hoy i Volahasiniaina
Niavaka ny seho ! Vokatra hafa mihitsy no nentin’i Volahasiniaina sy Raboussa teny an-tsehatra tetsy amin’ny IFM Analakely ny faran’ny herinandro teo. Seho nahasarika mpankafy zavakanto.
Volahasiniaina sy ireo mpitendry miaraka aminy miangaly ny mozika miainga amin’ny nentin-drazana. Ry Raboussa fantatra amin’ny fahaiza-mifehy ny rap. « Voarain’ny olona tsara ilay tolotra nomenay azy. Na samy mozika aza, tontolo roa samihafa no nezahina nampifandraisina mba hamoaka zava-baovao hafa indray, nandritra ny seho nataon’izy ireo tetsy amin’ny IFM Analakely ny zoma alina teo. « Tena tsy nampoizinay ilay izy. Mozika tsy noeritreretina hiray sehatra mihitsy, kanefa dia voarain’ny olona tsara ny tolotra », hoy i Volahasiniaina.
« Notendrenay araka ny fomba fijerinay azy ny mozikan-dRaboussa. Nasianay haingony hafa tamin’ny alalan’ny valiha sy ny kabosy. Ny mozikanay indray nasiany tonony », hoy Volahasiniana raha namintina ny naseho teny an-tsehatra. Ireo izay zatra naheno ny hiran-dRaboussa niaraka tamin’ny zavamaneno mavesatra, nanjary nahare tsiro vaovao tamin’ny alalan’ny valiha sy kabosy. Somary nahenoina aingam-panahy bagasy sy jazz ihany koa ny feon-kira nolalaovin-dRy Volahasiniaina.
Tazana teny an-tsehatra Rakotonirainy Njakanirina (piano, clavier, hira), Leiky Rakoto (zavamaneno ravaka, hira), Mi’mozi (gitara sy hira), Vola (valiha, kabôsy, zavamaneno ravaka ary hira), Raboussa (hira, rap). Tom (hira, rap) ary Fy (hira).